Mmemme Maka Onye Ọ Bụla - Dr. Adem
Chọrọ ọgwụgwọ kansa?
- Nnọọ anabataghị
Have gwụchala usoro ọgwụgwọ ị nwere?
Weghachite akụkụ ahụ gị na sistem gị
Currently na-anata ọgwụgwọ oge?
Tinyekwuo ohere maka ịlanahụ
Wantchọrọ iweghachi sistemụ ahụ gị?
Wulite ọta gị
Na-achọ usoro ọgwụgwọ ọzọ sitere na sayensị
Nhọrọ ndị bụ isi maka ọgwụgwọ ọrịa ọdịnala agbanwebeghị n'afọ iri. A ka na-eji ịwa ahụ, kemotemo, na radieshon mee ihe bụ isi. Ọgwụ mgbochi ọrịa na ọgwụ mgbochi ọgwụ ka nọ n'ọkwa nnwale ma ọ bụ na-eji naanị dịka nhọrọ ọgwụgwọ ọzọ.
Ihe a na-elekwasị anya na ọgwụgwọ dị na mbibi kachasị nke mkpụrụ ndụ kansa n’atụleghị sistemu ọrịa yana ogo ndụ.
Nke a bụ kpọmkwem ebe ị ga - ahụ isi nsogbu nke ọgwụgwọ ndị a. Nsonaazụ ha na-ewute ndị ọrịa. Kemmotherapy na radieshon na-emebi sistemụ ahụ na akụkụ ahụ n'ụzọ nke ogo ndụ onye ọrịa na-adabakarị ruo na ọgwụgwọ ọzọ agaghị ekwe omume.
Nsogbu ozo bu imeghari nkpuru cancer. Ọtụtụ mgbe ha na-eguzogide ọgwụ n'ihi usoro ọgwụgwọ gara aga nke na usoro ọgwụgwọ ndị ọzọ anaghị arụ ọrụ nke ọma.
Nke a bụ ọnọdụ siri ike maka ndị ọrịa niile. Ha achọghị ịkwụsị, ma n'aka nke ọzọ, ha achọghị imerụ ahụ ha ahụ na-enweghị isi, ma.
Nke a bụ ebe anyị nwere ike ịnye gị ụzọ ọzọ. Ihe omume m nwere usoro ọgwụgwọ kachasị mma ị nwere ike ịchọta ụwa niile ma a bịa n'ịgwọ mgbakwunye na ọgwụ cancer ọzọ.
E webatara echiche ọgwụgwọ mba ụwa n'otu atụmatụ ọgwụgwọ pụrụ iche. Usoro ọgwụgwọ niile dị nro ma na-anabata ya, mana ọ na-arụ ọrụ nke ọma n'otu oge. Ha na-agbaso ụkpụrụ sayensị siri ike, ndị ọrịa ejirila ya mee ihe nke ọma.
Ewezuga ibibi mkpụrụ ndụ cancer, anyị na-elekwasị anya na ime ka usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ ike, na-ebido ịdị ndụ ndụ na ọrụ ya. Anyị kwenyere na ọgwụgwọ cancer ga-aga nke ọma ma ọ bụrụ na echebara ihe ndị a niile echiche.
Usoro ọgwụgwọ anyị nwekwara ike inye aka mgbe ọgwụgwọ ọdịnala adịghịzi arụ ọrụ ma ọ bụ ghara iji ya mee ihe ọzọ ọ bụla. Ezubere ha maka ndị ọrịa, ndị ga-achọ ime ihe ọzọ yana ụzọ ụda sayensị.
Gwụchala usoro ọgwụgwọ ị nwere
Ọ bụ ihe nwute, ọtụtụ ọrịa kansa na-alaghachi mgbe oge ụfọdụ gasịrị. Ihe kpatara nke a bụ na enweghị ọgwụgwọ ga-ekwe nkwa mbibi mkpụrụ ndụ kansa niile. Ọ bụrụgodị na e mesiri onye ọrịa obi ike na ọgwụgwọ ahụ gara nke ọma ma gwọọ ya, nke a apụtaghị na ihe egwu ahụ agwụla.
Zọ eserese ọgbara ọhụrụ dịka CT, MRI ma ọ bụ PET scan naanị nwere ike ịchọpụta etuto ahụ n’elu otu nha. Obere akpụ nke na -arụ naanị milimita n’ịdị n ’nwere ike ghara ịchọpụta mana enwere ike ịnwe ọtụtụ nde mkpụrụ ndụ cancer nke nwere ike gbasaa n’ahụ ma mepụta ọrịa kansa ọhụrụ.
Bestzọ kachasị mma megide nke a bụ ịkwụsị akparamagwa ịkwalite ọrịa kansa na iwulite sistemụ ọrịa siri ike. Usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ na-arụ ọrụ nke ọma ma nwee ike ịchọpụta ma gbuo mkpụrụ ndụ cancer na-emepe emepe.
Ọ dị nwute, usoro ọgwụgwọ ọrịa kansa a na - enwe mmetụta dị njọ na sistem. Usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ, bụ nke dịlarị ike tupu ọgwụgwọ ahụ, nọ n'ọnọdụ siri ike karị mgbe nke a gasịrị. N'ihi ya, anyị bụ ndị na akwado maka mmemme nlekọta nlekọta nke na-akwalite ahụ anụ ahụ dị mma ma rụkwaa usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ.
Currently na-anata ọgwụgwọ ị na-eji eme ihe ugbu a
Udi ihe ịga nke ọma nke ọgwụgwọ ọgwụgwọ ot, dika kemoterapi na radieshon, enweghị afọ ojuju.
Ha na - ebute nsogbu n'ọtụtụ ọkwa:
Ọ bụghị nanị na ha na-egbu mkpụrụ ndụ cancer kamakwa mkpụrụ ndụ dị mma. Nke a na-ebute mmebi akụkụ ahụ. Akụkụ ahụ dị mkpa dịka ụbụrụ, obi, imeju na akụrụ nwere oke na ha ịrụ ọrụ ha. Ike ọgwụgwụ nke anụ ahụ na mgbe ụfọdụ ọbụna mbibi na-adịgide adịgide na-esite.
Ihe na-eto eto nwere ọtụtụ mkpụrụ ndụ cancer dị iche iche, nke ha nwere ihe iche iche. Usoro ọgwụgwọ dị iche iche na - egbukarị mkpụrụ ndụ cancer ndị na - adịghị ike (nke na - adịghị ike) ma kwe ka mkpụrụ ndụ ndị ka sie ike (dịgide) dịrị ndụ. Nke ikpeazụ na-amụba ngwa ngwa mgbe ọ bụla ọgwụgwọ, nke pụtara na arụmọrụ kemoterapi na-ebelata na ngwa ọ bụla.
Nchebe kachasị mma megide mkpụrụ ndụ kansa ọhụụ bụ sistem anyị. Nke a na esikarị ike site na kemoterapi ma ọ bụ ụgwụ. Mgbe ọgwụgwọ ya gasịrị, a na-ahapụ onye ọrịa inwe ihe nchebe zuru oke na-efu.
Nsonaazụ ndị dị na ọgwụgwọ ahụ na-eduga n'agụụ, nke ahụ na-eduga n'iwepụ ibu na ahụ ike ọzọ. Ndụ onye ọrịa na-ebelata ngwa ngwa.
N'iburu nke a n'uche, anyị ewepụtala mmemme na-eme ka ọrụ ọgwụgwọ na ọgwụgwọ radieshon dị ka nke ezubere iche belata mmetụta ha. Anyị ghọtara etu esi emeghachite mkpụrụ ndụ cancer na-eguzogide ọgwụ yana otu esi echebe sel dị mma site na mmebi nke ọgwụgwọ mepụtara.
Ihe mmemme a bụ nsonaazụ nke afọ 15 nke nyocha na itinye akwụkwọ na Germany, Austria, na Thailand ma ndị dibịa German na ndị America mepụtara.
Wantchọrọ iweghachi usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ
Ọrịa sistemụ na - esighi ike pụtara na anyị enweghị ike igbochi ọrịa nje n'ụzọ dị irè ma na-enwekarị ike ibute ọrịa. Anyị na-enwekwa ike ọgwụgwụ, n'okpuru ihu igwe na enweghị ume na ịnya ụgbọ ala. Ọbụna nsogbu ịta ahụhụ pụrụ ịbụ ngosipụta nke immunodeficiency.
Anyị bi na gburugburu ebe obibi na-emebi ahụ ike anyị ebe ọ bụ na nri anyị na ụzọ ndụ anyị anaghị egbo mkpa anụ ahụ. N’ime ngụkọta nke mkpụrụ ndụ 100 ijeri, ọ na - enye ya ọgụ dị iche iche kwa ụbọchị. Nke ọ bụla n'ime narị puku ijeri dọla atọ a nwere usoro nke nchekwa na mgbake. Ozugbo usoro ndị a gwụsịrị, mkpụrụ ndụ na - emebi ma ndị ọhụrụ dochie ya.
Agbanyeghị, usoro a nwere njehie yana, n'ọnọdụ ụfọdụ, ọ na - ebute sel ndị na - adịghị ala ala nke nwere ike ibute ọrịa cancer mgbe e mesịrị.
Site n’ụbọchị amụrụ anyị, mmadụ ọ bụla nwere mkpụrụ ndụ kansa nke achọpụtara ma bibie ya site n’usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ihe dị iche iche na - emebi usoro ahụ, ọ nweghịzi ike ịrụ ọrụ nchekwa ya, ọrịa ndị siri ike dịka ọrịa kansa nwere ike ibute.
N'iburu nke a niile, ọ dị ezigbo mkpa ịnọgide na-alụso ọrịa ọgụ ọgụ oge niile. A wulitela usoro ihe owuwu anyị ihe karịrị afọ 15 ma nwee ike inyere ndị ọrịa aka na nke a.